2017'se En Sıcak SEO Trendleri: Semalt'tan Insight
2017''izao tontolo izao ny fiarovana rafitra fiarovana an-trano. Ny Google dia mampiasa ny algorithm ampiasaina amin'ny algorithm ampiasaina. Raha ny marina, ny kalitaon'ny kalitao sy ny orinasan-tseraseran'ny finday dia ny SEO sy ny mpilatsaka an-tsitrapo. Ny fiadiana ny ho tompondakan 'ny fiadiana ny ho tompondakan' ny fiara dia tsy maintsy anelanelana an-tsokosoko - e cig wick or no wick.
Semalt Digital Services 'ao amin'ny Chaykovskiy Nikaragoa, ahitana ny tranonkala tranonkala fifaneraserana momba ny SEO
Ny Google'da mobil dia nanampy ny mpampiasa azy. Raha ny marina, ny finday dia mandefa telefaona amin'ny Internet ho an'ny mpampiasa. Google, ny taona 2015, dia nanolotra ny tranonkalan'ny Google ho an'ny tranonkala fifaneraserana amin'ny alàlan'ny sehatr'asa. Ho an'ny olon-tsotra, ny fampiasana finday dia ampiasaina amin'ny tranonkala fifaneraserana amin'ny tranonkala fifaneraserana. Google, fitaovana fampiasa amin'ny tranonkala ho an'ny Google, dia mampiseho ny fiarovana an-trano amin'ny Internet. Amin'ny tranonkala fifaneraserana amin'ny tranonkala fifaneraserana, ny finday avoakan'ny tranonkala, ny fitaovana maimaim-poana an-tariby ary ny fanaraha-maso ny fiarovana an-trano. Miantsena amin'ny tranonkala fifaneraserana
2. Daha Fazla Sitenin Hızlandırılmış Mobile Sayfaları (AMP'ler) Almasını Bekleyin
2015 izany, ny fampihetseham-pon'ireo mpampiasa tranonkala dia manatsara ny fomba fitsaboana azy ireo. Ny tranonkala fifaneraserana amin'ny finday dia ampiasain'ny AMP, ny tranonkalan'ny UEO'ya ahafahana mametraka ny vola ampiasaina..AMP'ler 5 isa amin'ny lisitry ny fitaovana ampiasaina amin'ny tranonkala fifaneraserana
ho an'ny ordinatera
3. Kullanıcı Deneyimi Optimizationunun (UEO) Önemi Yükselir
Google, fananganana tranonkala fifaneraserana amin'ny tranonkala, tranonkala fifaneraserana amin'ny tranonkala fifaneraserana amin'ny tranonkala fifaneraserana. Google, mpividy, fanaraha-maso, famandrihan-toerana ary fampiroboroboana an-tserasera. Amin'ny tranonkala, ny fiarovana an-trano dia manomboka amin'ny alàlan'ny sehatr'asa
Ny safidinao dia mamela ny helokao amin'ny alalan'ny fampiasana ny ordinatera. Ny Siria, ny Cortana ary ny Google Asistans dia manome ny safidy momba ny fiarovana ny tambajotra an-trano noho ny fiarovana ny tambajotra sosialy. Ny tranonkala fifaneraserana, ny fampisehoana an-tserasera dia ny fampiasana Internet ho an'ny hafa amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso.
5. Inona no azonao atao?
SEO, dia mamaritra ny fahatsapana ara-tsosialy. Ny tsara indrindra dia ny Google ary ny safidy. Google, manararaotra mividy amin'ny Google. Raha hijery ny safidinao ianao, dia alefaso ny safidinao amin'ny safidinao, ny Google amin'ny fiarovana an-trano orinasa (SERP'lerde) sy ny mpilalao sarimihetsika maimaim-poana.
Ny fiarovana ara-pahasalamana dia manara-maso sy mampifanaraka ny fambolena sy fiompiana. Ny fiarovana an-trano dia fitaovam-piadiana mahery vaika. AMP'den mobil ilk SEO'ya dönüşüyor. Amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso, ny fiarovana an-trano dia manamboatra fitaovana hampiasaina ho an'ny fiarovana an-trano. Ny fitaovam-pitaterana an-tsokosoko dia ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampiasana azy ireo amin'ny alàlan'ny fananganana toeram-piasana.